ဆောင်ဂျွန်ကီရဲ့ အင်ချွန်းလေဆိပ် Terminal သစ် Promo ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်ထားပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
ဆောင်ဂျွန်ကီရဲ့ အင်ချွန်းလေဆိပ် Terminal သစ် Promo ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်ထားပါတယ်….
September 30, 201901422
ဆောင်ဂျွန်ကီကတော့ အာရှမိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြားမှာ အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသားပါ။ Descendants of the Sun ဇာတ်ကားနဲ့ အတူ နာမည်ကြီး လာ ခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာ (၃၁)မှာတော့ DOTS ဇာတ်ကားမှာ အတူ တွဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းဟေကိုနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့သူပါ။အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့လည်း ပရိသတ်တွေ က ဆက်ပြီး လက်ခံအားပေးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဆောင်ဂျွန်ကီတစ်ယောက် ဇန်န၀ါရီလ(၁၂)ရက်နေ့က အင်ချွန်းလေဆိပ် Terminal သစ်ဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါ တယ်။ဒီပွဲကိုတော့ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ Moon Jae-in တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်ဂျွန်ကီ ကလည်း သမ္မတရဲ့ အနားမှာ ရှိနေပြီး၊သမ္မတနဲ့ အတူ တရင်းတနှီးနှုတ်ဆက်စကား ပြောဆိုခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆောင်ဂျွန်ကီဟာ အင်ချွန်းလေဆိပ်ရဲ့ Promo ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ရိုက်ကူးပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင် အွန်လိုင်းပေါ် မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆောင်ဂျွန်ကီကတော့ ရုပ်တင်မဟုတ်ပဲ အသံသြဇာအပြည့်နဲ့ နောက်ခံစကားပါ ပြော ပေး ထားပါတယ်။
လေဆိပ် terminal သစ်ရဲ့ အဆောက်အအုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂျွန်ကီက ရှင်းလင်း ပြောဆိုထားတာလို့ kstar live မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Source : kstar live
ဆောငဂြွှနကြီကတော့ အာရှမိနြးကလေးပရိသတတြှကှေားမှာ အရမြးနာမညကြှီးတဲ့ မငြးသားပါ။ Descendants of the Sun ဇာတကြားနဲ့ အတူ နာမညကြှီး လာ ခဲ့တာပါ။အောကတြိုဘာ (၃၁)မှာတော့ DOTS ဇာတကြားမှာ အတူ တှဲသရုပဆြောငခြဲ့တဲ့ မငြးသမီးခွောလေး ဆောငြးဟကေိုနဲ့ လကထြပခြဲ့သူပါ။အိမထြောငကြပွှီးတော့လညြး ပရိသတတြှေ က ဆကပြှီး လကခြံအားပေးနကှတောကိုတှရေ့ပါတယြ။
ဆောငဂြွှနကြီတစယြောကြ ဇနနြဝါရီလ(၁၂)ရကနြကေ့ အငခြွှနြးလဆေိပြ Terminal သစဖြှငြ့ပှဲသို့ တကရြောကခြဲ့ပါ တယြ။ဒီပှဲကိုတော့ တောငကြိုရီးယား သမျမတ Moon Jae-in တကရြောကခြဲ့ပါတယြ။ဆောငဂြွှနကြီ ကလညြး သမျမတရဲ့ အနားမှာ ရှိနပှေီး၊သမျမတနဲ့ အတူ တရငြးတနှီးနှုတဆြကစြကား ပှောဆိုခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယြ။
ဆောငဂြွှနကြီဟာ အငခြွှနြးလဆေိပရြဲ့ Promo ဗီဒီယိုဖိုငကြို ရိုကကြူးပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုငြ အှနလြိုငြးပြေါ မှာ ထှကပြေါလြာခဲ့ပါတယြ။ဆောငဂြွှနကြီကတော့ ရုပတြငမြဟုတပြဲ အသံသှဇာအပှညြ့နဲ့ နောကခြံစကားပါ ပှော ပေး ထားပါတယြ။
လဆေိပြ terminal သစရြဲ့ အဆောကအြအုံနဲ့ပတသြကပြှီး ဂွှနကြီက ရှငြးလငြး ပှောဆိုထားတာလို့ kstar live မှာဖောပြှထားပါတယြ။
၇ ရက်အတွင်း ဆံပင်အရှည်မြန်စေမဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
ပရိသတ်တွေအတွက် အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်လိုက်တဲ့ နန်းအမရာရဲ့ပုံရိပ်…..